WARBIXIN: Cristiano Ronaldo Vs Neymar & 3 Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Karaan Kooxaha Real Madrid & PSG – Kooxda.com
Home 2018 February Champions League, France, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Cristiano Ronaldo Vs Neymar & 3 Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Karaan Kooxaha Real Madrid & PSG
WARBIXIN: Cristiano Ronaldo Vs Neymar & 3 Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Karaan Kooxaha Real Madrid & PSG
February 14, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxaha Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ayaa iska hor iman doona caawa iyada oo labada kooxood ay ku dagaalami doonaan wareega 16ka Champions League.
Cristiano Ronaldo iyo Neymar ayaa noqon doona xiddigaha sida weyn diirada loo saari doono laakiin labada kooxood ayaa haysta xiddigo leh farsamo iyo waliba awood ay ciyaarta ugu rogi karaan dhanka kooxdooda.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa xiddigaha go,aamin kara furahana u noqon kara kulanka xiisaha leh ee ka dhici doona Madrid.
CRISTIANO RONALDO V NEYMAR
Paaska muhiimka ah: 1-20
Laadka saxda ah: 46%-50%
Kulan noqon doona xaadir iyo waliba mustaqabal iyada oo uu xiddiga Ronaldo oo khabiir 33 jir ah ka hor iman doono mid ka mid ah da,yarta ugu fiican adduunka ee Neymar.
Sidoo kale waa mid soo bandhigi kara waxa ay Real Madrid heli doonto mustaqablak maadama si weyn loola xiriirinayoxiddiga reer Brazil tan ilaa markii uu ku biiray PSG.
Ronaldo oo 33 jir ah ayaa kulamadii ugu dambeeyay ku soo laabtay qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa kulamadii ugu dambeeyay isaga oo 4 kulan 7 gool ku dhaliyay.
Dhanka kale waxa aan la yaab ahayn in uu Neymar ku jiro qaab ciyaareed waali ah tan iyo markii uu ka hoos baxay hadhkii Lionel Messi isaga oo ku lug leh 44 gool oo ay kooxdiisu dhalisay caawin iyo dhalinba.
Marka champions league laga hadlo labada xiddig ee Ronaldo iyo Neymar ayaa kala leh 9 gool oo uu Ronaldo dhaliyay iyo 6 gool uu Neymar dhaliyay halka caawinta champions league uu James Milner kaliya ka caawin badan yahay kaas oo 5 gool caawiye ka noqday halka Neymar caawiye ka noqday 3 gool.
LUKA MODRIC V MARCO VERRATTI
Baaska muhiimka ah: 5/7
baaska la dhamaystiray: 89%-94%
Xilli si weyn loo daawan doono Ronaldo Marka laga hadlayo kooxda Los Blancos xiddiga dhabta ah ee Real Jooga sanadihii ugu dambeeyay ayaa ah Luka Modric kaas oo ka mid ah xiddigaha ugu fiican yurub marka laga hadlayo kubad abuurista.
Xiddiga reer Croatia ayaa ah xiddigaha ugu fiican khadka dhexe isaga oo khadka Real Madrid la hogaamiya xiddigaha Toni Kroos iyo Casemiro kaas oo xoriyad khadka dhexe ah siiya xiddigaha Kroos iyo Modric.
Xiddiga Verratti ayaa sidoo kal ah xiddiga ugu fiican khadka dhexe ee kooxda PSG isaga oo ah laf dhabarta kala maamusha isaga oo waliba ah xiddiga ugu kubad dilista badan ilaa haatan tartanka xilli ciyaareedkan.
MARCELO V DANI ALVES:
baaska la dhamaystiray: 81%-86%
Baasaska Guud: 324-445
Kubadaha uu dilay: 22-3
Kubadaha Crika ah Ee Ku Guulaystay: 6-1
Waa laba xiddig oo u dagaalamaya sidii ay u badbaadin lahaayeen kooxdooda in ay goolal qaabisho laakiin waa laba xiddig oo sidoo kale leh tayo iyo waliba wax tar dhanka weerarka ah.
Marcelo iyo Alves waa labo daafac oo casri ah, oo si isku mid ah iyaga oo halis galiya kooxdooda marka ay weerarka u baxaan kuwaas oo xiddigaha weerarka ee kooxda kale ka faa,iidaysanayaan.
Hadaba weerarad iyo difaacashada labada xididg ee isku xulka ah ayaa qayb muhiim ah ka qaadan doonta natiijada ay kooxdoodu kala bixi karto kulanka caawa.
Filed in: Champions League, France, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino